प्रबल घिमिरेकाे मृत्यु शंकास्पद जनाउँदै अनुसन्धान गर्न पत्राचार
विराटनगरमा लेखा परीक्षकको काम गर्दै आएका प्रबल घिमिरे (५२) को शंकास्पद मृत्युका विषयमा छानविन नभएको जनाउँदै वडा कार्यालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ ।
चराका बथान देखिन कम भएपछि डुङ्गामा सयर गर्दै चरा अवलोकन गर्न आउने विदेशी पर्यटक पनि घट्दै गएका छन्।
प्रदेश १ सरकारले पत्रकार सुरक्षा कोष स्थापनाको तयारी गरेको छ ।
'आईसीपीले प्रदेश १ मा समृद्धिको ढोका खाेलेकाे छ' सम्झौताको १४ वर्षपछि विराटनगर १८ बुधनगरमा निर्माण भएको एकीकृत जाँच भन्सार बिन्दु (आईसीपी) भारतले नेपाललाई हस्तान्तरण गरेसँगै संचालनमा आएको छ।
प्रदेश १ मा सार्वजनिक स्थलमा सुर्ती खानेलाई कारबाही सार्वजनिक स्थलमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेलाई कारवाही गरिने प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले बताएका छन् ।
नक्कली उपसेनानी पक्राउ नेपाली सेनाको उपसेनानी (लप्टन) बताउँदै नक्कली परिचयपत्र लिएर हिंड्ने एक युवकलाई बुधबार साँझ विराटनगर विमानस्थलबाट सेनाले पक्राउ गरेको छ ।
युवा वैज्ञानिक अधिकारीले आफ्नै गुरुलाई ठगेकाे आराेप नेपालमा कुनै बेला युवा वैज्ञानिकका नामले चिनिने डा. दिलीप अधिकारीले २०६२, २०६३ सालमा १ सय ११ जना युवाबाट उठाएको रकम फिर्ता गरेनन् साथै आफ्ना गुरुलाई पनि झुक्याएका छन् ।
कोशी टप्पुमा पक्षीको संख्या घट्दै कोशी टप्पुमा वर्षेनी जलपक्षीको संख्या घट्दै गएको छ । २५ पुसबाट शुरु भएको पाँचदिने पक्षी गणनाका क्रममा पक्षीको संख्या घट्दो पाइएको हो ।
कोशी टप्पुमा शुक्रबारदेखि चरा गणना नेपालमा पाइने ८८४ प्रजातिका चरामध्ये ५२८ प्रजातिका चरा पाइने कोशी टप्पुमा यस वर्षको चरा गणना शुक्रबारदेखि शुरु हुँदैछ ।
सिंगारिदै विराटनगर, ठाउँठाउँमा सफाइ अभियान विराटनगर महानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा बिहीबारबाट सफाइ शुरु गरेको छ ।
वडा कार्यालयद्वारा तीन सय १५ विद्यार्थीलाई निःशुल्क ट्युसन सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत मोरङ कटहरी २ का ३ सय १५ विद्यार्थीलाई वडा कार्यालयले निःशुल्क ट्युसन पढाउँदै आएको छ।
१० रुपैयाँमै पेटभरी भात विराटनगर १२ कोशी प्रोजेक्ट घर भई महानगरमा ई रिक्सा चलाउँदै आएका सुमन श्रेष्ठ हिजोआज होटलमा खाना खान जान छाडेका छन् । विराटनगरका समाजसेवीहरूले रु १० मै पेटभरी खाना खुवाउन थालेपछि उनी सस्तो खाना घरमासमेत लिएर जाने गर्छन् ।
प्रदेश १ मा पर्यटन वर्षको भव्य उद्घाटन ( फाेटाे फिचर) प्रदेश १ सरकारले विदेशी पाहुनालाई सहभागी गराउँदै भ्रमण वर्ष २०२० को शुरुवात गरेको छ ।
अपाङ्गता भएकाहरूको हस्तकला प्रदर्शनी प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लाका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले उत्पादन गरेका हस्तकलाको विराटनगरमा प्रदर्शनी गरिएको छ ।
विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता हतियार र विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ
प्रदेश १ का मोरङ, सुनसरी र ताप्लेजुङबाट प्रहरीले भूमिगत नेकपा विप्लव समूहका केन्द्रीय नेतासहित ६ जनालाई हतियार र विस्फोटक पदार्थसहित पक्राउ गरेको छ ।
विराटनगरमा खुला सडक दौड प्रतियोगिता हुने
मदन भण्डारी स्पोर्टस् एकेडेमीले भ्रमण वर्ष २०२० को अवसरमा विराटनगरमा खुला सडक दौड प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ ।
तेक्वान्दोमा विजयी प्रदेश १ का खेलाडी सम्मानित
२० औं राष्ट्रिय सिनियर आईटीएफ तेक्वान्दो प्रतियोगितामा प्रदेश १ बाट विजयी २१ खेलाडीलाई शनिबार सम्मान गरिएको छ ।
भारतमै रोकिए नेपाल आउने मालवाहक साधन भारत अररिया जिल्लाको जोगवनीस्थित मिरगञ्ज पुलको मर्मत थालिएकाले ५ दिनदेखि नेपालतर्फ आउने मालवाहक साधन नाकामै रोकिएका छन् ।
अटेरी व्यापारी विराटनगर गुद्री बजारका फलफूल तथा तरकारी व्यवसायीले सर्न अटेर गर्दा कटहरी–१ सिंघिया खोला किनारामा बनाइएको नयाँ कृषि बजार अलपत्र छ।
मेसिनगन सहित ९ हजार ९८२ गोली बरामद सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका ५ भरौलामा आज सर्ट मेसिनगन (एसएमजी) एक थानसहित ९ हजार ९ सय ८२ थान गोली फेला परेको छ ।
राजा विराटको दरवार संरक्षण गर्न संग्रहालय बनाइने “जमिन खरीद गरेर संघ र प्रदेश सरकारको सहकार्यमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउंने योजना बनाएका छौं”, मेयर पराजुलीले भने । पुरातत्व विभागले दरवार क्षेत्रको उत्खनन गरेर भेटिएका वस्तुहरु संग्रहालयमा राखेको छ ।
इजाजत बिनै ब्यांकिङ कारोबार गर्ने पक्राउ इजाजत नलिई पासबुकसमेत वितरण गरेर ब्यांकिङ कारोबार गर्ने सुनसरी इटहरीका दुई व्यक्तिलाई मंगलबार प्रहरीले पक्राउ गरेको छ।
महाधिवेशनमा अग्रज पत्रकारलाई पुरस्कार नेपाल फोटो पत्रकार महासंघको पहिलो केन्द्रीय महाधिवेशनमा अग्रज पत्रकारद्वय मोहन भण्डारी र हर्ष सुब्बालाई जनही रु २१ हजार १ सय राशिको पुरस्कारसहित सम्मान गरिने भएको छ ।
उद्योग नाफामा लैजाने कार्ययोजना बन्दैः राज्यमन्त्री दुगड उद्योग राज्यमन्त्री मोती दुगडले बन्द र रुग्ण उद्योगलाई संचालन गरेर नाफामा लैजाने कार्ययोजना बन्दै गरेको बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनमा मैथिली आइकन छानिने विराटनगरमा हुने अन्तर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलनमा मैथिलीभाषी आइकन छानिने भएको छ ।
मुस्लिम संघ मोरङमा विवाद नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन मुस्लिम संघ मोरङमा कार्यसमिति छनोटमा विवाद भएकाले अध्यक्ष मात्रै चयन गरिएकाे छ।
किबीले कमाल एउटा बोटमा ५० किलोसम्म फल्ने किबी पहाडी जिल्लाका भिरालो र पारिलो जग्गामा एक रोपनीमा १० बोटका दरले लगाउन सकिन्छ। गत वर्ष प्रतिकेजी रु. २०० का दरले इलाममा मात्रै करीब रु. ४० करोड बराबरको किबी बिक्री भयो।
अपाङ्गताको अनुभूति गराउन मन्त्रीलाई 'ह्वीलचियर' प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले अपाङ्गताको महशुस गर्न ह्वीलचियरमा बसेर नगर परिक्रमा गरी अन्तर्राष्ट्रिय अपाङ्गता दिवस मनाएका छन् ।